Kononel Abiyi TPLF Qaraa immoo Qalaa jiraa? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKononel Abiyi TPLF Qaraa immoo Qalaa jiraa?
Kononel Abiyi TPLF Qaraa immoo Qalaa jiraa?
Damee Boruutin, Waxabajjii 9, 2018
PM Abiy Ahmed is collecting awards while women and children are being slaughtered in Hararge (Oromia region) by Liyu Police.
TPLF ijaarsaa maafiyaa caasaa marsaa hedduu (super multi-layers of structure) qabdu waan taateef irra ishee isa tortore irraa yoo molqaan inni jala jirus akkuma sana kan tortore waan taheef garaagrumaa hin fidu. Namoonni tokko tokko deemsi Kononel Abiyi gochaa jiru kun TPLF suuta suuta buqqisee kan balleessu danda’u jedhanii warri eegatan jiru. Waan deemaa jiru kun TPLF qaruuf waan hojjetamaa jiru malee TPLF qaluu akka hin taane ifatti hubachuu qabna. Jijjirama waan jedhamu kana kan oofaa jiruu Ijaarsaa fi Mootummaa EPRDF jedhamu dha. Ijaarsaa fi Mootummaan EPRDF walii gala dhuunfaa TPLF akka tahes wal nama hin gaafachiisu.
Waan Kononel Abiyi akka hojii mootummaa godhee dhiyyeessu hunduu akkeekaa fi xiyyeeffannoo hojii geggeessituu(EPRDF executive committee) EPRDFiin kan murtaa’e dha. Waan isaan godhi jedhan gadi bahee afaan isaanii tahee uummatatti dubbata malee qofaa isaatti waan murteessuu danda’u tokko illee hin jiru. Seerri EPRDF akka hojii uummataa walabummaa qabaatee hin hojjenne harka isaa walitti xaxxee jira. Aaangoo murteessaa (absolute power) akka Malasaa Zeenawii qabaachuuf caasaa TPLF diigee gatuu qaba. Ammaaf hojii geggeessituu EPRDF jalatti hojjechaa jiraachuu malee afuura baafachuu iyyuu hin danda’u.
Tooftaan namoota yakkamoota tahanii uummata biratti baayyee jibaman kan akka Abbaa Duulaa ija uummataa duraa kaasanii EPRD itti bifa miidhagaa horuuf tattaaffiin godhamu jabaatee deemaa jira. Warri dhiiga uummataan harka dhiqaatee fi qabeenyaa biyyaa saamee uummataa fi biyya hiyyoomse utuu yakkaa isaaniif itti hin gaafatamiin badhaasaa argatanii akka bashananii jiraatan ayyaana argachuu isaanuu waan jiban hin fakkaatu. Uummatni dhiigni isaa dhangala’e, kan qabeenyi isaa saamamee jireenya gadadoo baraa baraaf saaxilamee warri yakkamtoonni kun heeraa fi seeratti akka dhiyaatan barbaada. Seeraa fi heera jalaa isaan dhoksuun akka biyyi sun araara dhugaa fi nagaa hin arganneef shira xaxxuu dha.
Jijjiramni kijibaa EPRDF afarsaa jiru karaa itti jaalalaa fi amantii uummata irraa argatanii hojii yakkamaa isaanii bara baraan itti fufuuf kan tilmaame dha. Dhugaa namoonni akka Getachow Assefaa fi J.Samoora Yoonus taa’itaa irraa kaasuun haamilee warra of tultota TPLF xiqqoo xuqquu ni danda’a. Haa tahu malee Samooraan bu’ee Seareen yoo bakka bu’ee akkumaan duraan jedhe caasaa TPLF isa irra keessaa tortore soqanii isaa tortoraa jalaa as baasuu taha malee ammas caasaan waraanaa TPLF harka jira. Eeyyee Getachew Assefaa buluguu foon namaa nyaatuu fi dhiiga namaa dhugu akka tahe mamii hin qabu. Garuu waan dagatamuu hin qabne Getachewn buluguu akka isaa leenjisee akka uummatatti gadi lakkisee akka jiru dha. Hojiin Getachewn raawwataa ture amma Mootummaan EPRDF jiraate itti fufa.
EPRDF of haaromsuuf haa wixxifatu malee karaan haaromuu danda’u tokko hin jiru. Uummatni Impaayeera Itoophiyaa EPRDF irraa abdii fi amantaa tokko illee hin qabu. Tooftaan EPRDF akka baran uummata burjaajessanii waliin dha’uudhaan dantaa fi aangoon namoota muraasa qabatanii kan hafee qawween bulchuu dha. Uummatni soda qawwee fi sossobaa EPRDF bira taree jira. Ijaarsonni EPRDF keessa jiran warra akka OPDO qoondaalota isaanii warra yakkamoota bakka tokko kaasanii bakka biraa geessuun jijjirama gochaa jirra jedhanii uummata gowwomsuuf yaalaa jiru. Tooftaa isaanii kanas uummatni waan irratti hubateef bu’aa wean fiduuf hin fakkaatu.
Mootummaan EPRDF qabeenya biyyaa kan tahe daandii Xiyyaaraa (Ethiopian Air Lines) , daandii baaburaa, telecom, warshaa sukaaraa fi warra kana fakkaatan gurguruuf mirga hin qabu. Mootummaan kun amma mootummaa uummataa hin taane itti qabeenya biyyaa gurguruuf seeraa fi heera achiin isa gahu hin qabu. Qabeenya biyyaa gurguruun kan dhufe shira TPLF xaxaa jirtuun akka tahe nama hundaaf ifa tahuu qaba. Qabeenya biyyaa kan saamee of harkaa qabu maqaa warshaa fi ijaarsota adda dddaan TPLF fi warra TPLFiif jilbaafatee duurome Tigroota qofa. Qabeenya biyyaa Itoophiyaa tooftaa biraan harka galshatanii biyyaa Itoophiyaa jedhamtu karaa dinagdee fi siyaasaa bara baraan bituuf of qopheessaa jiru. Murtiin kana fakkaatu kan dhufu hojii geggeessituu EPRDF kan TPLF iin hoogannamu irraa akka thae ifatti beekamuu qaba. Haalli kun eenyu jalaa iyyuu dhokataa waan hin taaneef yaroo koo baayyee irratti balleessuu hin fedhu.
Akka hubannaa koo yoo tahe Kononel Abiyi EPRDF qaruu irratti yaroo isaa balleessuu dhiisee yaroo ayyaana bareedaa qabu kana keessatti ijaarsota waa’ee biyyaa sana nu galsha jedhan hundaa walitti fidee akkaataa itti mootummaan cee’umsaa dhaabbatu marii gochuu dha. Mootummaa cee’umsaa kana keessatti bakka guddaa waan qabuuf mul’ata isaa akkaata itti hojii irraa oolu danda’u gochuuf dhiibbaa guddaa gochuuf ayyaana qaba. Mootummaa cee’umsaa kana keessatti ijaarsonni warra waraana qaban kan akka OLF fi ONLF hirmaachuun murteessaa dha. Isaaniin sodaatanii achi dhiibu irraa karaa danda’ameen of itti ammatanii akka mootummaa cee’umsaa kana keessaa qooda fudhatan gochuutuun nageenya dhugaa fi gahaa fiduu ni danda’a. Kana malees ijaarsota misensa lamaa fi sadii qaban walitti funaanuun biyyaa saanaaf hiikaa hin fidu. Kanaafu amma nuuf danda’ame dhugaa lafa jiru hubachuu fi furmaata uummataa fi biyyaa bara baraan nagaa fiduu danda’u filachuu qabna.
Tooftaan bakka tortorte irraa soqanii TPLF kukkulanii uummatatti deebisuuf deeman tasa fudhatama hin qabu. Wal fudhatanii badhuu waan fiduu danda’uuf Kononel Abiyi haala kana irratti of eegannaa jabaa isa barbaachisa. Kan isa baasu uummata wajjin dhaabbatee gaaffii uummata deebisuuf carraaquu malee qamaaxura TPLF keessa galee wajjin daaraa tahuu miti. TPLF yoo taate yaroo hundaa sobaan jiraachuuf shira xaxxuun kaayyoo fi akeeka ishhee isa duraa akka tahe namni hin beekne hin jiru.
TPLF amma illee akka bofaa biyyoo araabeen ka’a jettee waan abdattuuf fedhiin uummataa akka guutu hin barbaaddu. Kanaafu bara bulchaa TPLF darban kana keessa biyyi biyya booyichaa fi gaddaa kan tahe. TPLF amma aangoo siyaasaa fi dinagdee biyyaa aboomte jirtutti humanaan tahe sobaan uummata haamilee cabsitee bituuf rakkina hin qabdu. TPLF jaalaaa fi ammantaa uummata kan ishee dhabsiise of tuullumaa fi of jajjuu ishee akka the hubachuu qabdi. Kana booda akkan baren foololee jiraadha yoo jette waan hin fakkaanne. Uummatni Oromoo jijjirama OPDO fi EPRDF ittii of bokkoksan dhiisee Fincila Xumura Garbummaa bakkaan gahuuf qabsoo haddhooftuu gochuu qaba. Garbummaa umurii guutuu irraa bilisummaa guyyaa tokko wayya.
Dyer: Spell will not last for Ethiopia’s Magic Man